Semalt ရဲ့အပ်နှံထားသော SEO ဆိုသည်မှာ Dashboard တွင်ရရှိနိုင် tools များ၏အပြည့်အဝစာရင်း
Semalt ၏အထူး SEO Dashboard တွင်ရရှိနိုင်သည့်ကိရိယာများအပြည့်အစုံ
သင်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိရိယာများမှ SEO စည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုတစ်ခု၏ထိုးထွင်းသိမြင်မှုများကို စုစည်း၍ ဒိုင်ခွက်တစ်ခုတည်းတွင်ဖော်ပြရန်နည်းလမ်းရှိလျှင်ဘာဖြစ်မည်နည်း။ အစီရင်ခံစာများကိုအလိုအလျှောက်ပြုလုပ်ပေးခြင်းနှင့်သင့်အားဖြစ်ပျက်နေသောအရာများ၊ တစ်ရက်ပြီးတစ်ရက်ထွက်ခြင်း၊
ရှိသည် Semalt အပ်နှံထားသော SEO Dashboard (DSD) အဲဒါကသင့်အားလျင်မြန်စွာသောကရိယာများနှင့်ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုကုန်းပတ်တစ်ခုဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုသည်။ ၎င်းတို့ကို၎င်းတို့အသုံးပြုလိုသောမက်ထရစ်၊ သူတို့လိုချင်သည့်နံပါတ်များနှင့်၎င်းတို့လိုချင်သောစွမ်းဆောင်ရည်ကိုစစ်ဆေးရန်၎င်းတို့ကိုတိုက်ရိုက်ဖောက်သည်များနှင့်ညှိနိုင်သည်။
၎င်းသည်အွန်လိုင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနယ်ပယ်တွင်ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်တစ် ဦး ဖြစ်သော Semalt ၏နောက်ဆုံးထုတ်ကမ်းလှမ်းမှုဖြစ်ပြီးစျေးကွက်သမားတစ်ယောက်အနေဖြင့်သင်၏အလုပ်ကိုပိုမိုလွယ်ကူစေရန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် DSD အကြောင်း Semalt ဘလော့ဂ်တွင်အရင်ပြောခဲ့ဖူးသောကြောင့်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရှိနိုင်သောကိရိယာများကိုသာအာရုံထားမည်။
Semalt Dedicated SEO Dashboard မှတစ်ဆင့်သင်ရရှိနိုင်သောကိရိယာများအပြည့်အစုံမှာဤတွင်ဖြစ်သည်။
၁။ Google SERP analysis
မည်သည့်နည်းဖြင့် manual SERP စစ်ဆေးမှုများကိုဘယ်သူလုပ်သလဲ။
ယခုအချိန်သည် SERP ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအလိုအလျောက်လုပ်ရန်နှင့်ထိုအချိန်ကိုအမှန်တကယ်မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးလုပ်ဆောင်ရန်အတွက်အသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။ Semalt ၏အပ်နှံထားသော SEO Dashboard ဖြင့်သင်ခြေရာခံလိုသည့်သော့ချက်စာလုံးများကိုသင်ထည့်နိုင်သည်။ စနစ်ကသင်လိုအပ်သည့်သတင်းအချက်အလက်အားလုံးကိုပေးလိမ့်မည်။ ရက်များ၊ သီတင်းပတ်များနှင့်လများအရအဆင့်သတ်မှတ်ချက်၊ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော URLs များ၊
ဂူးဂဲလ် SERP ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအင်္ဂါရပ်ကသင်၏စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများလုပ်ဆောင်နေသည်၊ မည်သည့်အကြောင်းအရာအပိုင်းအစများသည်အဆင့်များကိုရွှေ့ပြောင်းပေးသည်၊ မည်သည့်နောက်ပြန်မဟာဗျူဟာမျိုးကိုထိုနံပါတ်များကိုမြင့်တင်ရန်သင်ပြလိမ့်မည်နည်း။
ပုံ ၁ - ရည်စူးထားသည့် SEO DASHBOARD သည်ပြသထားသည့်ရလဒ်များကိုပြသနိုင်ရန်ရှင်းလင်းသောမျက်နှာပြင်တစ်ခုရှိသည်။
Excel spreadsheets များကိုကျော်ပြီး SERP ရလဒ်များကိုဖတ်ရှုရန်နှင့်တိုင်းတာရန်လွယ်ကူသောသန့်ရှင်းသောမျက်နှာပြင်တစ်ခုတွင်ဖော်ပြပါ။
၂။ Automated Technical SEO Audit System
ယခုသင်လုပ်ဆောင်နေသည့်အရာများ - စာမျက်နှာမြန်နှုန်းပြissuesနာများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန် PageSpeed ​​Insights tool ကို အသုံးပြု၍ အကြောင်းအရာပြissuesနာများကိုနားလည်ရန်အကြောင်းအရာစာရင်းစစ်ကိရိယာနှင့်အကြောင်းအရာများ၊ UI နှင့် UX ပြissuesနာများကိုစစ်ဆေးရန်ပုံမှန်လက်စွဲစာအုပ်စစ်ဆေးခြင်းကိုအသုံးပြုပါ။
ဒီအရာအားလုံးကို dashboard တစ်ခုတည်းကနေအလိုအလျောက်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာမင်းတို့ကိုမင်းပြောရင်ကော။
Dedicated SEO Dashboard သည်ထိုအရာကိုအတိအကျပြုလုပ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုသင်ယုံကြည်ရမည်။ ဒီနေရာတွင် ၀ က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုလုံး၏ပုံနှင့်၎င်း၏ SEO အရည်အသွေးကိုတွေ့နိုင်သည်။ ကျနော်တို့ backlink ပရိုဖိုင်းကိုပြောနေတာ, ပြည်တွင်းရေး link ကိုဖွဲ့စည်းပုံ, စာမျက်နှာအမြန်နှုန်း, redirection နှင့် 404 အမှားအယွင်းများ, meta ဒေတာသတင်းအချက်အလက်စသည်တို့ပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ပိုကောင်းအောင်လိုအပ်သမျှကိုသင်နှင့်သင်၏ client ကိုစစ်ဆေးရန်နှင့်တိုးတက်စေရန် dashboard တွင်တွေ့နိုင်ပါသည်။
Ahrefs (သို့) SEMrush ကဲ့သို့သောတတိယပါတီကိရိယာများကိုကြီးမားစွာပေးသွင်းရန်မလိုပါ။ ၀ ဘ်ဆိုဒ်စိစစ်သူများအတွက်မလိုအပ်ပါ။ သငျသညျအရာအားလုံးကိုတစ်ခုတည်းပလက်ဖောင်း၌ရ။ အကောင်းဆုံးအပိုင်းကတော့သင့်ဖောက်သည်တွေကဒီအချက်အလက်ကိုသင်ကြည့်စရာမလိုဘဲတိုက်ရိုက်ကြည့်ခြင်းဖြစ်သည်။
3. ဝက်ဘ်စာမျက်နှာ Analyzer
ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှဆင်းသက်လာသောစာမျက်နှာသည်အရေးအကြီးဆုံးသောစာမျက်နှာဖြစ်လျှင် Semalt ၏ DSD သည်ထိုစာမျက်နှာကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးသင်မည်သို့တိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်သည်ဟူသောအကြံပြုချက်များကိုပေးလိမ့်မည်။ ဒါဟာစာမျက်နှာ၏ meta ဖော်ပြချက်ကို update သို့မဟုတ် bounce နှုန်းကိုလျှော့ချရန် CTAs ပတ်ပတ်လည်ကိုရွှေ့ကဲ့သို့အခြေခံဖြစ်နိုင်သည်။
4. မြန်နှုန်းစမ်းသပ် Tool ကို
မြန်နှုန်းစမ်းသပ်မှုတွေအများကြီးကိုပြောထားတယ်။ FCP နှင့် FMP ဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုစစ်ဆေးခြင်းနှင့်မြန်ဆန်မှုတိုးတက်စေရန်အသေးစားပြောင်းလဲမှုများပြုလုပ်ခြင်း။ စာမျက်နှာမြန်နှုန်းစစ်ဆေးသူများကသင့်အားဤအချက်အလက်များကိုပေးပြီးဖြစ်သော်လည်းအဖြေများသည်မရေမရာသို့မဟုတ်ကျယ်ပြန့်သည်။
သင်သည်မြန်နှုန်းစစ်ဆေးရန် Dedicated SEO Dashboard ကိုရွေးချယ်လျှင်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်သင့်အားအလုပ်မလုပ်သောအရာနှင့်အလုပ်မလုပ်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုပေးလိမ့်မည်။ သင်၏လိုအပ်သောပြောင်းလဲမှုများပြုလုပ်ရန်သင်၏နည်းပညာအဖွဲ့နှင့်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။ အနိမ့်ဆုံး ၈၀ ထက်မြန်သောနှုန်းသည်သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်၏ SEO အတွက်မသင့်တော်ပါ။
SEO ဆိုသည်မှာအရေးကြီးဆုံးသောအချက်တစ်ခုမှာထူးခြားသောအကြောင်းအရာဖြစ်သည်။ ထူးခြားမှုမရှိပဲသင်၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်သည် SERP များတွင်တိုက်ခိုက်လိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်မို့လို့သင့်ရဲ့အကြောင်းအရာအားလုံးဟာလူအစုအဝေးနဲ့ထူးခြားပြီးထူးခြားမှုရှိဖို့အရေးကြီးတယ်။
သင်သည်သင်၏အကြောင်းအရာများကိုအလွတ်သို့မဟုတ်အခြားအကြောင်းအရာအေဂျင်စီများမှလွှဲပြောင်းပြီး၎င်းတို့သည်၎င်းတို့သည် ၁၀၀% ထူးခြားမှုရှိသည်ဟုသင့်အားအာမခံလျှင်၊ သင်စစ်ဆေးရန်နှင့်အတည်ပြုရန်လိုအပ်သည်။ ဒီဟာစျေးကြီးတယ်
စျေးကွက်တွင်အကောင်းဆုံးကူးစက်ရောဂါစစ်ဆေးခြင်းကိုစစ်ဆေးသောကိရိယာမှာ Copyscape (သင်အများအားဖြင့်သုတေသီများအတွက်ဖြစ်သော Turnitin ကိုသင်မနှစ်သက်ပါက) ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ခရက်ဒစ်များအတွက်ပေးဆပ်ရန်အတွက်ငွေကောင်းသည်။ သင်၌ရာနှင့်ချီသောအရာများရှိနိုင်ပြီး၎င်းတို့အားလုံးကို Copyscape မှတဆင့် run ခြင်းသည်သင်၏ဘတ်ဂျက်ထဲသို့ကျလိမ့်မည်။ ဒီတော့ဘာလုပ်နိုင်လဲ
Semalt Dedicated SEO Dashboard သည်သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ plagiarism ပြissuesနာများကိုရှာဖွေနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုလုံးကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးပြီးဝက်ဘ်ပေါ်ရှိထုတ်ဝေပြီးသားစာများနှင့်အကြောင်းအရာနှင့်ကိုက်ညီသည်။ plagiarism report အသေးစိတ်ကိုသင်တွေ့နိုင်ပြီးလိုအပ်ပါကပြောင်းလဲမှုများပြုလုပ်နိုင်သည်။
ပုံ ၂ - ပြင်သစ်ဘာသာတွင်စာတန်းခုံပုံဥပမာ
၆။ SEO အစီရင်ခံစာထုတ်လုပ်သူ
Dedicated SEO Dashboard တွင်အရေးကြီးဆုံးသောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ဒေတာအားလုံးကို စုစည်း၍ သင့်ဖောက်သည်အတွက်အလိုလိုသိစေရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မက်ထရစ်များကိုဇယားများနှင့်ဇယားပုံစံများဖြင့်စာရင်းပြုစုပြီး SEO စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး၏လုပ်ဆောင်ပုံကိုမျက်လုံးမှိတ်ကြည့်သည့်အလိုအလျောက် SEO အဖြူရောင်တံဆိပ်အစီရင်ခံစာဖြစ်သည်။
သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီသင်ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာထိပ်ဆုံးဆင်းသက်သည့်စာမျက်နှာများကိုစာရင်းပြုစုခြင်း၊ M-O-M အပြောင်းအလဲများပြသခြင်းသို့မဟုတ်ဝက်ဘ်ဆိုက်အသွားအလာရရှိသည့်မြို့ကြီး ၁၀ မြို့တွင်စာရင်းပြုစုခြင်းများကိုဆိုလိုသည်။ ရွေးချယ်စရာများသည် Google Analytics နှင့် Adobe Analytics ကဲ့သို့အကန့်အသတ်မဲ့ဖြစ်သည်။ သင်ရွေးချယ်မည့်ဒေတာကိုညွှန်ပြသည်။
Pro သိကောင်းစရာ - သင်သည်ဤအစီရင်ခံစာကိုအလိုအလျောက်ပြုလုပ်နိုင်ပြီး၎င်းကိုသင်၏ client အားအပတ်စဉ်သို့မဟုတ်လစဉ်ပို့စေနိုင်သည်။
သင်၏ DSD အတွက်အုပ်ချုပ်မှုဘောင်တစ်ခုဖြစ်ပြီးသင်ကစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးအသစ်များထပ်မံထည့်သွင်းနိုင်သည်၊ သင်၏ဆက်တင်များကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်ပြီးသင်၏ dashboard တွင်အခြေခံကျသောပြောင်းလဲမှုများပြုလုပ်နိုင်သည်။
အက်မင်ဘောင်ကွက်ထဲ၌၊ သင်သည် interface ၁၁ ခုမှရွေးချယ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်သင်အသုံးပြုနိုင်သည့်အခြားထူးခြားသောလက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အင်္ဂလိပ်လိုမဟုတ်ဘဲအခြားဘာသာစကားကိုကြိုက်တဲ့ client ရှိပါသလား။ ဒီဟာကသွားဖို့လမ်း
Semalt Dedicated SEO Dashboard တွင်သင်စာရင်းသွင်းသောအခါဤအရာများသည်သင့်အတွက်ရရှိနိုင်သောအရေးကြီးဆုံးသောကိရိယာများဖြစ်သည်။ သငျသညျသရုပ်ပြရှာဖွေနေလျှင်, ငါတို့ထံသို့ ဦး demo site ဒါမှမဟုတ် အစစ်အမှန်ဥပမာနှင့်မှတဆင့် skim ။ သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိပါကကျွန်ုပ်တို့၏ ၁၄ ရက်ကြာအခမဲ့ရုံးတင်စစ်ဆေးမှုကိုစမ်းသပ်ပြီးအထုပ်တစ်ခုလုံးကိုနှစ်ပတ်အတွင်းစမ်းကြည့်နိုင်သည်။ သင်၏ SEO လုပ်ငန်းအတွက် Semalt DSD လုပ်ဆောင်နိုင်သည့်အရသာကိုသင့်အားလုံလောက်စွာပေးသင့်သည်။ ၎င်းကိုဈေးကွက်ရှိ UberSuggest, Ahrefs, SEMrush, RankWatch ရှိအခြားမည်သည့်ကိရိယာနှင့်မဆိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ။ DSD သည်သင်၏ဘတ် (စ်) အတွက်စုစုပေါင်းပေါက်ကွဲမှုကိုအဘယ်ကြောင့်ပေးသည်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
Semalt Dedicated SEO Dashboard ကိုအစီအစဉ်သုံးမျိုးဖြင့်ရရှိနိုင်သည်။
အခမဲ့ - ၁၄ ရက်ကြာအသုံးပြုနိုင်သည့်အခြေခံလုပ်ဆောင်ချက်များကိုသာအသုံးပြုသည်။
Lite - စွမ်းဆောင်ချက်အများစုအပြင် Semalt မှအဆင့်မြင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှု။
Pro - All features နှင့် Semalt ၏ 24x7 support သည် LeadGen အကူအညီနှင့်အတူ။
၂၀၂၁ ဇန်နဝါရီလတွင် Semalt သည်စက်မှုလုပ်ငန်းများမှဖောက်သည်များအတွက် Dedicated SEO Dashboards ၁၅၀ ခန့်ကိုဖန်တီးခဲ့သည်။ အတူတူသူတို့ကနံပါတ်များကိုခုတ်လှဲခြင်းနှင့် SEO စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပြသခြင်းနှင့်အခြား Data Third Studio ကဲ့သို့သောအခြား third-party tool များကိုအရှက်ရစေသည်။
သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူအားအသစ်သောအရာတစ်ခုဖြင့်အထင်ကြီးစေလိုပါသလား ကြိုးစားကြည့်ပါ အပ်နှံထားသော SEO Dashboard ဒီနေ့